Uyilandela njani inkcazo yeGPS S10 kunye neGolden Fold | I-Androidsis
Usuku lufikile. Umhla abasebenzisi abaninzi babekhangele phambili kuwo. Namhlanje ngoFebruwari 20 i-Samsung iveza ngokusesikweni isiphelo sayo esitsha. Uluhlu oluphezulu apho sifumana khona i-Galaxy S10 kunye ne-smartphone yayo yokuqala yokusonga, iGolden Fold. Ke ithembisa ukuba ngumsitho ogcwele iindaba kwiifemi zaseKorea.
Isamsung ikhethe ukubonisa izixhobo zayo kwisixeko saseSan Francisco. Umsitho uqala nge-19: 00 CET (Ixesha leSpanish). Njengesiqhelo, unokulandela ukuboniswa kwezi Galaxy S10 kunye neGreen Fold bukhoma kwi-Intanethi. Unokulandelwa njani lo msitho?
Kule meko, uphawu lwaseKorea Isivumela ukuba silandele umsitho bukhoma kwiwebhusayithi yawo. Kuqhelekile ukuba benze umjelo ophilayo wolu hlobo lwenkcazo. Into eyenzekayo kwakhona ngale Galaxy S10 kunye neGolden Fold. Ke ngoko, sinokuyenza kwiwebhusayithi yenkampani yaseKorea, kule khonkco.
Into eqhelekileyo kukuba i-Samsung Uya kuba nokuqondisa ngqo kwi-YouTube. Nangona ngalo mzuzu kungekho khonkco enikezelweyo kubasebenzisi bokulandela le ntetho. Ngokukodwa kwiiyure ezimbalwa ezizayo ikhonkco liya kubekwa phezulu ukuze ibonakale kwiwebhu.
Kodwa, kuyo nayiphi na imeko, iwebhusayithi ye-Samsung iya kuba yindlela onokuthi ngayo landela le ntetho yohlobo lweKorea. Jonga yonke into elungiswe yiGPS S10 kunye neGolden Fold. Nangona kwezi veki sinenqwaba ye ukuvuza malunga nezi zixhobo. Lo nto siyazazi izinto zayo ezininzi.
Ukuba amarhe ayinyani, kwimeko yeGPS S10 inokugcinwa ukusuka ngoLwesine, Februwari 21. Ukwazisa kwakho icwangciselwe inyanga kaMatshi. Kwimeko yeGolden Fold, ifowuni esongelayo yefowuni, akukho nto iyaziwayo ngoku. Nangona kunokwenzeka ukuba ayizukumiselwa kude kube phakathi kulo nyaka kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Uyilandela njani inkcazo yeGPS S10 kunye neGolden Fold